ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေရေခးရီးစဉ်ပြီးဆုံးတာနဲ့ ဂီတအလုပ်တွေနဲ့ အဆက်ဖြတ်တော့မယ့် ဗြိတိန်အဆိုတော် Ed Sheeran - YOYARLAY Digital Media and News
ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် အက်ဒ် ရှီရန် (Ed Sherman) ကတော့ အောင်မှုအလီလီရထားတဲ့ ဂီတအလုပ်တွေကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အဆက်ဖြတ်စွန့်လွှတ်ထားဖို့ရှိတယ်လို့ ဖွင့်ဟအသိပေးလိုက်ပါတယ်။
အသက် (၂၈) နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အက်ဒ် က ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာမှာလက်ထပ်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ဇနီးသည် ရှရယ် ဆီးဘွန်း နဲ့အတူ မိသားစုဘဝလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းကုန်ဆုံးချင်တာကြောင့် အခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်အဆိုတော် Ed Sheeran
ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေရေးခရီးကနေ မွေးရပ်မြေပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက် ပထမဆုံးပြန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သောကြာည၊ အစ်ပ်ဆွစ်မြို့ဖျော်ဖြေပွဲမှာ လာရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေကို “အခုလိုပြောရတအဲ့တွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် (၂) နှစ်လောက်ဆက်တိုက် နယ်လှည့်ပြီး ဖျော်ဖြေပွဲတွေလုပ်ခဲ့တာကို အားလုံးလည်းသိနေကြမှာပါ။ အခုအချိန်ကတော့ အဲဒါတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ လာမယ့်နှစ်နည်းနည်းလောက်ကျမှပဲ ပြန်ဆုံကြတာပေါ့” လို့ အက်ဒ်က ပရိသတ်တွေကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
(၂) နှစ်တာကာလအတွင်း ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ဖျော်ဖြေပွဲပေါင်း (၂၅၀) ကျော်ထိကျင်းပခဲ့တဲ့ အက်ဒ်ရဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်ဟာ အကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့အပြင် U2 အဖွဲ့က ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ 360 Tour ရဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး နယ်လှည့်ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်စံချိန်ကိုလည်း ချိုးဖျက်ပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတောင် အက်ဒ်ရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်ဈေးက ပွဲပေါင်း (၁၁၀) ထိ ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ U2 ရဲ့ 360 Tour ပွဲလက်မှတ်ဈေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀၁. ၁၅) ဆိုတာထက် ၁၄. ၂% လောက်ပိုလျော့နည်းနေသေးတာပါ။
“အခုလိုမျိုး စံချိန်တစ်ခုချိုးဖျက်နိုင်တဲ့အထိအောင် အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကို တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်က ကျွန်တော့်အတွက် အမြဲတမ်းအမှတ်ရစရာတစ်ခုဖြစ်နေမှာပါ” လို့ သူ့ရဲ့ အင်စတာဂရမ်မှာလည်း အက်ဒ်က ရေးသားနှုတ်ဆက်ထားပါတယ်။
Ref: CNN “Ed Sheeran reveals he’ll be taking an ‘extended break’ from music to spend time with wife”
Previous Previous post: လူအများအပြားစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတဲ့ iPhone 11 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ You Tube ဗီဒီယို
Next Next post: ရခိုင်ပြည်နယ် နေရပ်စွန့်ခွာသူများအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရုတ်ရဲ့ မူဝါဒရပ်တည်ချက်ကို ပြောကြား ခဲ့တဲ့သတင်း
Farc ပါတီခေါင်းဆောင်ကို လုပ်ကြံဖို့ ကြိုးပမ်းမှုကို ကိုလံဘီယာရဲတပ်ဖွဲ့ တားဆီးနိုင်ခဲ့
လက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့ Farc အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်း တိုင်မိုချန်ကိုကို လုပ်ကြံဖို့ ကြိုးပမ်းမှုကို တားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကိုလံဘီယာရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က သတင်းပေးချက်အရ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ တိုင်မိုချန်ကိုနေထိုင်ရာ လယ်တောအိမ်နားက လမ်းပေါ်မှာ လုပ်ကြံရေးသမား ၂ ယောက်ကို ကြားဖြတ်တားဆီးပြီး အသေဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့…
Published: January 13, 202011:27 am
ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုကိုခံစားခဲ့ရတဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင် လက်စီရေဘီ (Lexi Rabe)
ဒီနေ့ခေတ်မှာ Cyber Bullying လုပ်တာမျိုးက နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပစ်မှတ်ထားကြရုံသာမကဘဲ နာမည်ကျော်ကြားနေတဲ့ ကလေးတွေကိုပါ ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ “Avengers:End Game” ရုပ်ရှင်ထဲမှာ တိုနီစတာခ့် ( Ironman ) ရဲ့သမီး မော်ဂန်စတာ့ခ် (Morgan…
Published: June 26, 20199:45 am Updated: 2:30 pm
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို ပြန်လည်အနိုင်ရရှိဟုဆို
Published: November 9, 20201:21 pm
Published: November 9, 202012:54 pm